Kanzuru yeBuhera yovakisa zvikoro
‘Ndakabikwa nemukadzi’ … Akaroverwa huku yeKisimusi
MaKirisitu akadzingirirwa nenyoka
Zvikwereti kuvadzidzi vekuyunivhesiti
Nyoka ine musoro unenge wemunhu -‘Inondinanzva muviri wose’ -‘Ndizvo zvandiitisa hupofu’
Majeri haasati azarisa wani
Gudo pweshe pabhenji. . . richidya sadza nenyama
‘Musanyare, sungisai vanobata chibharo’
Baba pfacha . . .Justin namhamha vakazvivharira… ‘Taingoona mifananidzo yezvinyadzi’
800 vodzidza patsva
You are at:Home»NHAU DZEDZIDZO»Kanzuru yeBuhera yovakisa zvikoro
By Kingstone Mapupu on	 March 2, 2018 · NHAU DZEDZIDZO
KANZURU yeBuhera Rural District Council inoti ine hurongwa hwekuvaka zvimwe zvikoro mudunhu iri kuitira kuti zvinge zvichikwanirana nehuwandu hwevana avo pari zvino vari kufamba nzendo refu kuenda kuchikoro.
Muhurukuro neKwayedza, sachigaro wekanzuru iyi, VaNgoni Musakaruka – avo vanovazve kanzura kuwadhi 19 – vanoti vari kushushikana zvikuru nenzendo dziri kufambwa nevamwe vana kuenda nekudzoka kuchikoro.
“Sekanzuru, tinotarisira kuvaka zvimwe zvikoro kana mukana wawanikwa sezvo tiine zvikoro zvishoma zvinoita kuti vana vedu vafambe nzendo refu kuenda nekudzoka kuchikoro. Sekuno kune Bangure Secondary, vana vanobva kure zvikuru sezvo vachifamba makiromita anodarika 15 pakuenda kuchikoro. Chikoro ichi ndicho choga chine Form 6,” vanodaro.
Vanoti kune vamwe vana vanobva kure vanoroja dzimba mumisha iri pedyo nechikoro ichi nemunzvimbo yemabhizimisi yekwaBangure.
Mamiriro ezvinhu akadai, vanodaro Kanzura Musakaruka, ane njodzi sezvo vanasikana vachigona kupedzisira vosiira chikoro panzira vapihwa mimba kana nekuda kwezvimwewo zvikonzero.
“Tine mabhodhingi maviri muno anoti Nyashanu neMakumbe izvo tinoti dai tavakirwawo imwe muno asvika pamatatu. Tine Hande Secondary zvakare iyo yave kutangawo kuva bhodhingi iri kutora vasikana chete pari zvino.” Zvakadai, Kanzura Musakaruka vanoti kanzuru yavo iri kushingairirawo kuvandudza migwagwa yepamabhizimisi eMurambinda Growth Point nemimwewo midiki yemunzvimbo iyi.
“Migwagwa yedu muno maMurambinda yanga yaipa zvikuru, saka tiri mubishi kuigadzirisa zvichireva kuisa giravhera netara. Ibasa rave padanho repamusoro iro ratinotarisira kuti rinopera munguva pfupi iri kutevera,” vanodaro.
GRADE 7 …Hurongwa hwegore ra2019